Arts - McKnight Foundation
Qalabka Beastada ee Powderhorn Park
Deeqbixiyaasha farshaxanka ee McKnight Arts oo sida caadiga ah dalban lahaa dib u cusboonaysiinta deeqdooda 2020 waxay heli doonaan kordhinta deeqda sababtuna tahay Covid-19. Hay'adahan waxay ka heli doonaan ogeysiis emayl ah oo ku saabsan kordhinta kooxda farshaxanka. Wax talaabo ah loogagama baahna deeq bixiyayaashan.
Intaa waxaa dheer, McKnight wuxuu hirgaliyay muddo seddex bilood ah oo dheeri ah dhammaan warbixinnada jadwalka bixinta. Fadlan la hadal xiriiriyaha barnaamijkaaga si aad u codsato wax ka-beddello kale oo suurtagal ah oo ku saabsan heshiisyadaada deeqaha sida ujeedka deeqda ama qaab dhismeedka waqtiga.
Hay'adaha cusub, mashaariicda, ama barnaamijyada aan hadda haysan deeqaha barnaamijka 'Arts Arts McKnight' waxaa lagu dhiirigelinayaa inay codsadaan wareegtadeena weydiinta bilowga ah ee Oktoobar, Oktoobar 1 - 15. Fadlan la xiriir sarkaalka barnaamijkaaga ama Renee Richie, barnaamijka farshaxanka ku-meelgaarka ah iyo deeq-bixiyaha, iyo su'aalaha.
Booqo boggan si aad ugu cusbooneysiiso ilaha Covid-19 ee faa'iido-darrooyinka iyo ogeysiisyada la xiriira jawaabta McKnight ee fayraska.
Golaha Degaannada Gobolka
Ujeeddada Barnaamijka: Taageerida fannaaniinta shaqeeya si ay u abuuraan bulshooyin firfircoon. Minnesota waxay dhalinaysaa marka ay farshaxannadu sii fiicnaato.
Sida naqshadeyaal, hormariyayaal, iyo hoggaamiyeyaal, fanaaniinta shaqada ee Minnesota waa darawalada hoose ee nooca farshaxanka iyo dhaqanka. Farshaxanadu waxay kobciyaan aqoonsigeena dhaqameed, qiyaasaan xalka, iyo isbedelka bulshada.
Ururadu waxay ku siin karaan qaab-dhismeedyo taageero oo muhiim ah si ay u shaqeeyaan farshaxan-yahanno, iyagoo ka caawinaya farshaxyadu in ay sii wadaan shaqadooda hal abuurka
Machadka McKnight wuxuu ku maalgaliyaa farshaxanka iyo qaybaha kale si ay u taageeraan fannaaniinta shaqada ee Minnesota oo u doodaan qiimaha shaqadooda.
Farshaxanka Warbaahinta, Fikradaha, iyo Khayraadka
Warqad Furan oo Loogu Tala Galay Bulshadda Farshaxan ee Kajawaabidda Covid-19
By Arleta Little, Sarah Lovan Abriil 2020
Ogeysiiska Abaalmarinta Farshaxanka Farshaxanka 2020
McKnight wuxuu soo dhoweynayaa Isuduwaha DeAnna sida Maareeyaha Barnaamijka Fanka
Sarkaalka Barnaamijka iyo Agaasimaha Xiriirka Fanka